Ama-Best Web Scraping Tools Ngokusho Kwe-Semalt
ifomu elisebenzayo ku-database noma isitoreji sekhompyutheni. Ukususwa kweWeb kuhilela ukukhishwa kwedatha yewebhu, ukuvunwa kwewebhu noma ukukhishwa kwesikrini kwedatha yewebhu. Ukuze uthole i-web ukususa okuphumelelayo, kubalulekile ukukhetha ithuluzi lewebhu le-scraper elifanele.
Amathuluzi we-web scraper asebenzisana futhi akhiphe ulwazi lwewebhusayithi njengomsebenzisi ojwayelekile uma usebenzisa isiphequluli sewebhu njenge-Google Chrome. Ngaphandle kwalokho, lawa mathuluzi aqoqa idatha evela kuwebhusayithi futhi ayigcine kumafolda wendawo - konditsioneer autolec. Kunamathuluzi amaningi we-web scraper, angakusiza ekusindiseni ulwazi lewebhusayithi ku-database. Kulesi sihloko se-SEO, sichaze amanye amathuluzi esofthiwe we-web scraping ekhona emakethe:
Isobho esihle. Leli thuluzi linomtapo wolwazi we-Python, ongathola wonke amafayela we-HTML ne-XML. Abasebenzisi abasebenzisa izinhlelo ze-Linux njengo-Ubuntu noma Debian bangasebenzisa le software ye-scraping software. Ithuluzi elihle le-Soup lingakusiza futhi ukuthi ugcine ulwazi lwewebhusayithi endaweni eyikude.
mport.io. I-Import.io iyithuluzi lamahhala elivumela abasebenzisi ukuvuna idatha nokuyihlela kudathasethi. Leli thuluzi le-intanethi linesikhombikubona somsebenzisi esithuthukisiwe okubili kokusebenzisana nokusebenzisa umsebenzisi. Ukususwa kwedatha akukaze kube lula kangaka!
i-Mogenda.. Ku-Mogenda, ungakwazi ukwenza amasevisi we-web ukusula usebenzisa izici zokudonsa nokudonsa. Leli phuzu bese uqhafaza isofthiwe kunika amandla abasebenzisi ukuthi baqoqe okuqukethwe kusuka kumawebhusayithi amaningi emhlabeni wonke.
Hlanganisa iHubhu. I-Parse Hub iyithuluzi lewebhu le-scraper elinesibonakaliso esilula ukusebenzisa. Abasebenzisi bajabulela ukujabulela i-UI yabo eqondile enezici eziningi. Ngokwesibonelo, usebenzisa i-Parse Hub, kungenzeka ukudala ama-API kumawebhusayithi anganikeli ukuwahlinzeka. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangakwazi ukuvuna okuqukethwe kwewebhusayithi bese bayigcina kumarekhodi wendawo.
ku-Okthoba. I-Octoparse iyisicelo se-Windows samahhala sokuqoqa ulwazi lwewebhusayithi. Leli thuluzi lekhasi le-web scraper lewebhu liqoqa idatha yewebhu engakhiwe futhi ihlele kwifomu ehlelekile ngaphandle kokubhala ikhodi. Ngakho-ke, ngisho nabasebenzisi abanolwazi lwezinhlelo zero bangasebenzisa leli thuluzi ukwenza amawebhusayithi abo asebenze ngendlela abayifunayo.
I-CrawlMonster. I-CrawlMonster iyisofthiwe engeyona nje eyenza i-website ihlwithe kodwa iphinde iqinisekise ukuthi abasebenzisi bazuza ezicini ze-Search Engine Optimization. Isibonelo, abasebenzisi bangacubungula amaphuzu ehlukile wedatha kumawebhusayithi ahlukahlukene.
Xhuma uxhumano. I-Connotate iyithuluzi elisha lewebhu elisha elisebenza ngendlela ezenzakalelayo. Isibonelo, abasebenzisi bangacela ukubonisana ngokunikeza i-URL yewebhusayithi abayidingayo ukuze bayibambe. Ukwengeza, i-Connotate yenza abasebenzisi basebenzise futhi baqede idatha yewebhu.
Isikhwama esivamile. Ukusebenzisa leli thuluzi, kungenzeka ukuthi udale amasethi amaningi wedatha yamawebhusayithi aqhamukayo. I-Crawl evamile yenza abasebenzisi bayo bagcine ulwazi lwewebhusayithi kwisitatimende sedatha noma ngisho nesitoreji sendawo yokugcina. Kanti, I-Crawl evamile yenza abasebenzisi baqoqe idatha eluhlaza kanye nolwazi lwe-meta lwamakhasi ahlukene.